I-Loft enokubukwa okumangalisayo kwe-Andes, e-Quito - I-Airbnb
I-Loft enokubukwa okumangalisayo kwe-Andes, e-Quito
Quito, Pichincha, i-Ecuador
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Carlos
I-Elegant Loft enombono omangalisayo we-Andes nedolobha. Itholakala eNyakatho ye-Quito emkhakheni we-La Carolina, lena indawo enhle kakhulu yezokuvakasha, ne-Metropolitan kanye ne-La Carolina Parks eseduze kakhulu.
Indawo eyanele, enhle nenethezekile enombono omuhle wedolobha. Inegumbi lokulala elinombhede olingana nendlovukazi, indawo yokuphumula enovulandi, ikhishi namagumbi okugeza amabili.
Ikhishi, ifriji, imicrowave, isomisi nemishini yokuwasha konke kungaphakathi kweyunithi ukuze ukhululeke.
Uzokwazi ukufinyelela ku-inthanethi neNetflix.
umbhede oyidabulu engu- 1, 1 umbhede wosofa, imibhede yomoya engu- 1
4.77 · 31 okushiwo abanye
Kusebangeni lokuhamba ngezinyawo ukusuka e-Metropolitan Park, ipaki elikhulu lemvelo, elibalwa nezindlela zokuhamba izintaba, izindawo ezizinikele ezemidlalo, izindawo zokungcebeleka nezinja, Ungathola izindawo zokudlela ezijwayelekile zase-Ecuadorian eduze kwepaki.
Isakhiwo sitholakala imizuzu emi-5. kude nesitolo esikhulu, amakhemisi, kanye nenxanxathela yezitolo yaseGranados Plaza. Kusebangeni elifushane ukusuka eLa Carolina, okuyindawo yezohwebo lapho uzothola khona ezinye izitolo ezinkulu, izindawo zokudlela ezahlukahlukene, Amasinema kanye namabha.
Audiovisual Producer and Photographer, with great love for mountains and nature.
I love travelling around Ecuador, and I am happy to say I know most of it, and the best it has to offer.
Njengosokhaya, ngizosiza nganoma iyiphi indlela engingayenza ukuze ngenze ukuhlala kwakho kube ukuzizwisa okungcono kakhulu ngangokunokwenzeka.
Ngingancoma imisebenzi ehlukene yezokuvakasha okumele ngiyenze e-Quito, kanye nase-Ecuador jikelele.
Uma udinga noma yiluphi ulwazi ngedolobha nokuthi ungaya kuphi, ungangabazi ukungishayela ucingo.
Ngingancoma imisebenzi eh…
Izilimi: English, Norsk
Hlola ezinye izinketho ezise- Quito namaphethelo